ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
June 10, 20190327
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တဲ့ ကော်ဖီချစ်သူတွေရှိမှာပေါ့နော်။ ကော်ဖီဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေရွေးထိုင်တက်ပြီး ရောက်တာနဲ့အရင်ဆုံးဘာကော်ဖီမှာရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတက်တဲ့ လူတွေရောရှိလား။ ဒီလိုဆို ကော်ဖီချစ်သူလေးတွေအတွက် ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁။ ကော်ဖီက သင့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကို ပိုတိုးမြင့်စေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုလျော့ချပေးပါတယ်။
၂။ သွေးထဲက အက်ဒရီနယ်လင် (Adrenaline) ဓာတ်ကိုမြင့်မားစေပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေပါတယ်။
၃။ ကိုယ်ခန္ဓာကအဆီတွေလောင်ကျွမ်းဖို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကဖင်းဓာတ်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ၁၁ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်မြန်ဆန်လာစေလို့ပါ။
၄။ ဆိုဒါတွေနဲ့မတူတာက ကော်ဖီက သင့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုမမြင့်တက်စေပါဘူး။
၅။ ကော်ဖီမှာ ကယ်လိုရီမပါဝင်ပါဘူး။
၆။ ကော်ဖီသောက်တဲ့လူတွေမှာ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ (Alzheimer’s Disease) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေလျော့နည်းပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား – ၂ (Type2Diabetes) ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို ၂၃ ကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိလျော့ကျစေပြီး ပါ့ကင်ဆန် ရောဂါ (Parkinson’s Disease) ဖြစ်ပွားမှုကို ၃၂ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ကျစေပါတယ်။
၇။ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၄ ခွက်လောက်တက်သူတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်နိုင်မှု ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကော်ဖီက စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို အထိုက်အလျောက်ဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပါ။
၈။ ကော်ဖီမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဓာတ် (Antioxidants) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ ခုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး ကင်ဆာအပါအဝင်တခြားရောဂါများအန္တရာယ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၉။ ကော်ဖီက ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပိုပြီးမြင့်မားစေပါတယ်။
၁၀၊ ကော်ဖီသောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေလျော့နည်းပါတယ်။
၁၁။ ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ချပေးပါတယ်။
၁၂။ ကော်ဖီကအသည်းအတွက်လည်းကောင်းမွန်ပြီး အသည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်။
၁၃။ ကော်ဖီသောက်တာက သင့်ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
၁၄။ ကော်ဖီရဲ့ရနံ့လေးကတောင် သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
မနကမြိုးလငြးတာနဲ့ကောဖြီတစခြှကသြောကလြိုကရြမှ ကွနပေတြဲ့ ကောဖြီခစွသြူတှရှေိမှာပေါ့နြော။ ကောဖြီဆိုငကြောငြးကောငြးလေးတှရှေေးထိုငတြကပြှီး ရောကတြာနဲ့အရငဆြုံးဘာကောဖြီမှာရမလဲဆိုတာစဉြးစားတကတြဲ့ လူတှရေောရှိလား။ ဒီလိုဆို ကောဖြီခစွသြူလေးတှအတှေကြ ကောဖြီသောကခြှငြးကှောငြ့ဘယလြိုကနြွးမာရေးအကွိုးကွေးဇူးတှရနေိုငသြလဲဆိုတာ ကှညြ့လိုကရြအောငြ။
၁။ ကောဖြီက သငြ့ရဲ့စှမြးအားတှကေို ပိုတိုးမှငြ့စပှေီး ပငပြနြးနှမြးနယမြှုတှကေိုလွော့ခပွေးပါတယြ။
၂။ သှေးထဲက အကဒြရီနယလြငြ (Adrenaline) ဓာတကြိုမှငြ့မားစပှေီး ကိုယလြကလြှုပရြှားမှုတှအတှေကြ အဆငသြငြ့ဖှစနြစပေေါတယြ။
၃။ ကိုယခြနျဓာကအဆီတှလေောငကြွှမြးဖို့ကိုကူညီပေးနိုငပြါတယြ။ ဘာကှောငြ့လညြးဆိုတော့ ကဖငြးဓာတကြ သငြ့ခနျဓာကိုယရြဲ့ဇီဝကမျမဖှစစြဉတြှကေို ၁၁ရာခိုငနြှုနြးအထိ တိုးမှငြ့မှနဆြနလြာစလေို့ပါ။
၄။ ဆိုဒါတှနေဲ့မတူတာက ကောဖြီက သငြ့ရဲ့သှေးပေါငခြွိနကြိုမမှငြ့တကစြပေါဘူး။
၅။ ကောဖြီမှာ ကယလြိုရီမပါဝငပြါဘူး။
၆။ ကောဖြီသောကတြဲ့လူတှမှော အယဇြိုငြးမားရောဂါ (Alzheimer’s Disease) ဖှစပြေါနြိုငခြွလွေော့နညြးပါတယြ။ ဆီးခွိုရောဂါ အမွိုးအစား – ၂ (Type2Diabetes) ဖှစပြှားမှုနှုနြးကို ၂၃ ကနေ ၅၀ ရာခိုငနြှုနြးလောကအြထိလွော့ကစွပှေီး ပါ့ကငဆြနြ ရောဂါ (Parkinson’s Disease) ဖှစပြှားမှုကို ၃၂ ကနေ ၆၀ ရာခိုငနြှုနြးအထိလွော့ကစွပေါတယြ။
၇။ တစနြကေို့ ကောဖြီ ၄ ခှကလြောကတြကသြူတှမှော ကိုယြ့ကိုယကြိုသကှေောငြးကှံစညနြိုငမြှု ၅၃ ရာခိုငနြှုနြးအထိ လွော့ကနွိုငပြါတယြ။ ဘာ့ကှောငြ့လညြးဆိုတော့ ကောဖြီက စိတဓြာတကြခွှငြးကို အထိုကအြလွောကဆြနြ့ကငွနြိုငတြဲ့အစှမြးရှိလို့ပါ။
၈။ ကောဖြီမှာ အငတြီအောကဆြီးဒငြ့ဓာတြ (Antioxidants) ကှယဝြစှာပါဝငလြို့ ခုခံအားစနစကြိုကောငြးမှနစြပှေီး ကငဆြာအပါအဝငတြခှားရောဂါမွားအနျတရာယမြှလညြး ကာကှယပြေးနိုငပြါတယြ။
၉။ ကောဖြီက ဦးနှောကရြဲ့စှမြးဆောငရြညတြှကေိုပိုပှီးမှငြ့မားစပေါတယြ။
၁၀၊ ကောဖြီသောကတြဲ့အမွိုးသမီးတှမှော အရပှေားကငဆြာဖှစပြှားနိုငခြွလွေော့နညြးပါတယြ။
၁၁။ ကောဖြီသောကခြှငြးကှောငြ့နှလုံးရောဂါဖှစနြိုငခြွကေို ၂၁ ရာခိုငနြှုနြးအထိလွော့ခပွေးပါတယြ။
၁၂။ ကောဖြီကအသညြးအတှကလြညြးကောငြးမှနပြှီး အသညြးရောဂါဖှစနြိုငခြွကေိုလညြးလွော့ကစွပေါတယြ။
၁၃။ ကောဖြီသောကတြာက သငြ့ကိုပိုပှီးပွောရြှငစြပေါတယြ။
၁၄။ ကောဖြီရဲ့ရနံ့လေးကတောငြ သငြ့ရဲ့စိတဖြိစီးမှုတှကေိုလွော့ကစွပေါတယြ။
Ref : LIfestyle
ကြက်သွန်ဖြူကင်ကို ပုံမှန်စားခြင်းသုံးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
ဖိုတိုရှောပ့်နဲ့ ခရီးစဉ်အတုတွေဖန်တီးပြီး အင်စတာဂရမ်မှာ prank လုပ်ရင်း အောင်မြင်သွားသူအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….